चलचित्र विकास बोर्डले कानुनीरुपमै बक्स अफिस लागू गर्ने तयारी गरेको छ । सुरुमा हल संचालकहरुसँगको सहमतीमा बक्स अफिस लगाउने तयारी थालेको बोर्डले अहिले केही हलहरुले अड्चन थाप्न थालेपछि कानुनी रुपमै अगाडि बढ्ने तयारी गरेको हो । यसकालागि बोर्डले, सूचना तथा संचार मन्त्रालयको समेत साथ पाएको छ । बोर्ड अध्यक्ष निकिता पौडेलले भनिन्-‘सूचना तथा संचार मन्त्रालयले आइतबार हामीलाई एउटा पत्र पठाउँदैछ । जुन पत्रको आधारमा हामीले कानुनी रुपमा के-के काम गर्न सक्छौ भनेर अध्ययन गर्छौ र एक्सन लिन्छौ ।
किन हतारमा जोडिएको थियो सर्भर ?
चलचित्र विकास बोर्डले वैशाख १ गतेबाट काठमाडौंमा बक्स अफिस जोड्ने बताएको थियो । तर, हल सञ्चालकहरु यसमा सहमत भएपछि चैत्रको मध्य भागमै इ-टिकेटिङ जडान भएका हलहरुलाई बक्स अफिसको मुख्य सर्भरमा तान्ने तयारी गरियो । यसका लागि थापाथलीको सुबिसी कार्यालयमा बक्स अफिसको सर्भर पनि राखियो । चलचित्र संघका अध्यक्ष प्रदिपकुमार उदय, चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य नरेन्द्र महर्जन, चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारी सहितको टोली गठन भएको थियो । यसमा, सल्लाहकारको रुपमा क्यूएफएक्स हलका मालिक नकिम उद्दिन समेत छन् । क्यूएफएक्सले नै सबैभन्दा पहिला बक्स अफिस सर्भरमा जोडिन तयार रहेको बताएपछि विकास बोर्डले पनि तोकिएको मिति भन्दा पहिले नै सर्भर जडान गरेको थियो । कसले हाल्यो भाँजो ? आफैले गरेको सहमतीबाट पछि हट्दै अहिले केही हलका सञ्चालकहरु भाँजो हाल्न लागिपरेका छन् । एफएक्सकै सञ्चालक मध्येका एक भाष्कर ढुंगाना र अष्टनारायण हलका मालिक त्रिरत्न मानन्धर अहिले खुलेरै बक्स अफिस सर्भरसँग जोडिन तयार नहुने बताउँदै आएका छन् । भाष्करले त आफूहरुले सरकारलाई किन स्पष्ट हिसाब बुझाउनु भन्दै बक्स अफिसको सर्भरमा नजोडिने घोषणा गरेका छन् । आफूहरुले नै छुट्टै सर्भर राख्ने र केन्द्रिकृत व्यापारिक आँकडामा नजाने उनको भनाई छ । यस्तै, अष्टनारायण हलका मालिक त्रिरत्नले पनि आफै छुट्टै सर्भर जडान गर्ने अडान राख्दै आएका छन् । यी बाहेक, गुण हल, गंगा हलका सञ्चालक पनि बक्स अफिसको विरोधमा देखिएका छन् । के गर्छ बोर्डले ? चलचित्र विकास बोर्डले भने बक्स अफिस लगाएरै छाड्ने बताएको छ । बोर्ड अध्यक्ष पौडेलले अनलाइनखबरसँग भनिन्-‘अहिले सबै व्यापारलाई सरकारले केन्द्रिकृत गरिरहेको छ । अब, म भ्याट नै तिर्दिन, राजश्व छल्छु भनेर कसैले भन्न पाउँदैन । हामी, कानुनले दिएको अधिकार अनुसार अगाडि बढ्छौ । निकिताका अनुसार, सूचना तथा संचार राज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा पनि बक्स अफिस लगाउने अडानमा छन् । अरु, कार्यक्रमहरु अर्को आर्थिक बर्षमा गर्दा पनि हुने भन्दै उनले यो आर्थिक बर्षमा बक्स अफिसमै फोकस हुन बोर्डलाई निर्देशन पनि दिएका छन् ।